Heni-kaja heni-boninahitra ny firenentsika ary nioty aim-panahy sy nahazo hafatra mafonja avy tamin’iny raiamandreny am-panahy sady filoham-panjakana iny. Ahoana kosa ny ho fizotry ny toe-draharaha manomboka eto ? Ho tafita ve ny fananarana mivantana na an-kolaka sa ho toy ny rano natobaka an-damosin-gisa ? Ny toe-draharaha politika ato ho ato no hamaritra azy, fa raha ny zava-misy dia toa manomboka miverina amin’ny fiainana sy tsio-drivotra mahazatra isika. Betsaka izay toky nomena izay, maro ny fampanantenana, ny velirano tsy mbola mety mitondraka amin’ny valalabemandry ka hivahan’ny olana tsy tambo isaina miantraika amin’ny rehetra. Ny vidim-piainana midangana, ny sandam-bola miha mitotongana, ny fahasahiranana mitombo fa ny vahaolana mbola angatahana amin’ny avo mba tena hahay sy hahatsapa ny fahorian’ny Malagasy ny mpitondra ka hamoaka vahaolana mafonja sy maharitra. Hiroso amin’ny fifidianana indray mantsy isika, ka ho takotakon’ny hafanana politika ny fahoriam-bahoaka. Efa hananika ny herintaona nitondrana tsy ho ela saingy tsy mbola misy fototra bilidinina hita aloha, tsy mbola nisy trano iray nitsangana amin’ireo dimy alina hatao, mbola nisy tanimbary nozaraina,… ka sao atomboka aloha ireo noresahina vao milaza zavatra hafa indray. Hirarakopana indray mantsy ny fampantenana amin’ny propagandy ary handeha ny politikan’ny ratsy tarehy mangata-bady ka ny anaran-dray no enti-mangataka, kanefa ilay ray atsy ambadika atsy toa kepoka tsy mahita izay horaisina, ka hivadika ho fampiesonana hatrany izay ambara.